Obianọ Agaala Njem Nleta n'Ebe Ahụ A Na-Arụ Ụlọ Ezumeezu Mba Ụwa n'Anambra - Igbo News | News in Igbo Language
May 27, 2021 - 15:46 Updated: May 30, 2021 - 13:08
Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obianọ ekwupụtala ma gosipụta obi ụtọ ya banyere etu ọrụ si aga n'ebe ahụ ọchịchị ya na-arụ nnukwu ụlọ ezumeezu mba ụwa na steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ kwupụtara nke a oge ọ gara njem nleta n'ebe ahụ a na-arụ ya bụ agadaga ụlọ ezumeezu dị n'Agụ Awka, n'isi obodo steeti ahụ, bụ nke ọ nọrọ na ya wee gagharịa n'ebe ahụ iji hụ ka ọnọdụ siri gbata kwụrụ n'ebe ahụ na etu ya bụ ọrụ si aga.
Dịka ọ na-akpọpụtasị uru dị iche iche ya bụ ogige ga-ewebàta na steeti ahụ ma a rụchaa ya, ọ gara n'ihu mee ka a mara na nke ahụ ga-enyekwa aka ịkwàlite ọnọdụ mmepe na steeti ahụ, kewàpụtara ụmụafọ steeti ahụ ọtụtụ ohere ọrụ, tinyere ọtụtụ uru ndị ọzọ ọ ga-eweta.
Ọ kọwara na ya bụ ogige ga-eme ka Anambra soro n'ọnụọgụgụ steeti olenaole nwere ụdị ụlọ ezumeezu mba ụwa dị etu ahụ n'ala Nigeria, ma mekwazie ka e nwee ike ịchịkọba ụdị nnukwu ọgbakọ dị iche iche n'ime steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ nọkwàrà n'otu ụbọchị ahụ wee gaa njem nleta n'ebe ahụ a na-arụ ogige ama egwuregwu n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ, iji marakwa ka ọrụ si aga n'ebe nke ahụ.
N'okwu nke ya banyere ụlọ ezumeezu ahụ, Komishọna na-ahụ maka ewumewu ụlọ, bụ Maazị Michael Okonkwo nyèrè nkọwa banyere ụlọ ahụ nà etu ọrụ siri gbata kwụrụ n'ebe ahụ, ma mee ka a mara na ya bụ ọrụ na-abịazị n'isi njedobe ugbua.
Dịka ọ na-akọwa na ụlọ ezumeezu ahụ ga-enyekwa aka n'ịkwàlite ọnọdụ mmepe n'ụzọ dị iche iche ma mpaghara ahụ, na n'ịkwàlite ọnụego na-abata na steeti ahụ; Kọmishọna Okonkwọ mere ka a mara na Gọvanọ Obianọ nyere mgbe a ga-arụcha ọrụ ahụ, ma kwuo na ha na-agbasi mbọ ike ịrụchapụ ya tupu oge ahụ. Ọ gakwara n'ihu kọwaa na ihe soro wee gbutụ oge n'ịrụchapụ ụlọ ahụ bụ ịkụ elu ya, maka na ọ bụ naanị ígwè ka e jiri wee kpàá ma kụọ ya, ma bụrụkwazie nke were ọtụtụ ogè.
Ọ kpọpụtasịkwara uru ndị ọzọ dị iche iche ogige ahụ ga-ewètara steeti ahụ na ụmụafọ ya, kọwaa ie ndị ọzọ dị mkpa banyere ogoogo e ji arụ ya bụ ụlọ, ma kwupụtazie olileanya o nwere na ha ga-arụchapụ ya bụ ọrụ tupuu oge a kara aka eruo.